ကလမိုင်ဒီးယ ကူးစက်ရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကလမိုင်ဒီးယ(Chlamydia infection) ဟုခေါ်သည့် ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးသည် များသောအားဖြင့် လူတို့တွင် လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကလမိုင်ဒီးယ ထရချိုမက်တစ်စ်(Chlamydia trachomatis) ဟုခေါ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပြီး အဏုဇီဝဆေးဖြင့်ပင် ပျောက်ကင်းနိုင်သည်။ ကလမိုင်ဒီးယ ကူးစက်ရောဂါ ဟူသည့် စကားစုအား ကလမိုင်ဒီးယစီး ဗက်တီးယီးယား မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည့် မျိုးစိတ်များကြောင့် ဖြစ်ရသော ကူးစက်ရောဂါအားလုံးကို ခေါ်သည်။ စီ ထရချိုမက်တစ်စ်(C. trachomatis) ကို လူတို့တွင်သာ တွေ့ရသည်။.မျက်စိရောဂါနှင့် ကလမိုင်ဒီးယ သည် လူ၏ လိင်အင်္ဂါမှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော အဓိက ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဤကူးစက်ရောဂါသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတို့တွင် လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်သော ယေဘူယျရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နှစ်စဉ် ကလမိုင်ဒီးယ ကူးစက်ရောဂါ၏ ပြဿနာပေါင်း ၂.၈ သန်းခန့် ဖြစ်ပွားသည်ဟု သိရသည်။ ယင်းသည် လူများ၏ ယေဘူယျ အများဆုံး STI ဗက်တီးယီးယားဖြစ်သည်။
စီ ထရချိုမက်တစ်စ် ကို သဘာဝအခြေအနေ၌ လူတို့၏ ဆဲလ်များအတွင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပါးစပ်၊ စအိုနှင့် ရိုးရိုးလိင်ဆက်ဆံနေစဉ် အတွင်း ကလမိုင်ဒီးယား ပြန့်ပွားနိုင်လေသည်။ မိခင်မှ ကလေးငယ်အား ပုံမှန် မီးဖွားခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ ကလမိုင်ဒီးယ ရောဂါရှိသော လူအများစုတွင် ရောဂါလက္ခဏာ မပြချေ။ ကလမိုင်ဒီးယား ရောဂါရှိနေသော မိန်းမများ၏ တစ်ဝက်နှင့် လေးပုံ ပုံ သုံးပုံသော မိန်းများသည် ကလမိုင်ဒီးယ ရောဂါရှိနေပါသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာမရှိခြင်းသောကြောင့် ယင်းတို့ ကူးစက်ခံနေရသည်ဟု မသိကြချေ။ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း အကျိုးဆက်များ ကြာသော်အချိန် သို့မဟုတ် တိုတောင်းအချိန် နှစ်မျိုးစလုံးနှင့်အတူ မျိုးပွားခြင်းနှင့် အခြား ကျန်းမာရေး ပြဿနာများအား အဓိကဖြစ်ပွားစေသည်။
ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းတွင် ကလမိုင်ဒီးယ မျက်စိနာရောဂါ သို့မဟုတ် ထရချိုမ(Trachoma) သည် မျက်စိကွယ်သည်အထိ ဖြစ်ပွားစေသော ယေဘူယျ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်မာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ခန့်မှန်ချက်က မျက်ကွယ်သူများ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၃.၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဆို၏။.
↑ www.chlamydiae.com (professional) - Taxonomy diagram။ 18 September 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thylefors B, Négrel AD, Pararajasegaram R, Dadzie KY (1995). "Global data on blindness" (pdf). Bull World Health Organ 73 (1): 115–21. PMID 7704921. Archived 25 June 2008 at the Wayback Machine.
↑ Resnikoff S, Pascolini D, Etya'ale D et al (2004). "Global data on visual impairment in the year 2002" (pdf). Bull World Health Organ 82 (11): 844–851. PMID 15640920.
Resources, symptoms list and guidelines about Chlamydia Archived7April 2013 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကလမိုင်ဒီးယ_ကူးစက်ရောဂါ&oldid=704710" မှ ရယူရန်